Momba anay - Shijiazhuang hongmeida Trading Co., Ltd.
Izahay dia manao zavatra somary hafa kely, ary toy izany no itiavantsika azy!
Shijiazhuang hongmeida Trading Co, Ltd dia mpamokatra fonon-tanana voamarina amin'ny alàlan'ny ISO9000, ISO14001 ary ISO18001. Ny orinasa anay dia naorina tamin'ny 2000. Taorian'ny 20 taona ny fandrosoana mitohy, dia lasa mpanamboatra fonon-tanana lehibe indrindra izahay any amin'ny faritra avaratr'i Sina. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa anay dia manana mpiasa mihoatra ny 800 ary fitaovana maherin'ny 1000 no isan-karazany. Ny orinasa dia manana departemantan'ny orinasa, departemanta miantoka ny vokatra, departemantan'ny fikarohana teknolojia sy fampandrosoana, departemanta fividianana, sns. Ny orinasa eto amintsika dia matetika no manao fonon-tanana vita amin'ny landihazo, fonon-tànana etiquette, fonon-tanana polyester ary fonon-tany fanjairana.
Ny filozofianana momba ny raharaham-barotra dia "mpanjifa voalohany, voalamina kalitao", manome ny mpanjifa vokatra tsara sy serivisy kalitao no tanjontsika mandrakizay.
Afaka manampy izahay hanatsara ny orinasanao
Fitaovana sarona tsara kalitao tsara: 100% lava-kitapo lava avy any Xinjiang, polyester, poleta mifangaro polyester, landihazo amin'ny spandex, polyester miaraka amin'ny spandex, satin ect.
Karazan-akanjo fonon-tanana isan-karazany: manana karazana fonon-tanana 60 isan-karazany isika miaraka amin'ny fonon-tanana vita amin'ny lamba, ny fonon-tanana ny nilona, ​​ny fonon-tanana Fleece, fonon-tanana, toy ny fanamboarana haingon-trano, tsipika roa amin'ny cuff, ny hatavy lava, ny fitombenana azo antoka, ny akanjo tsara azo antoka ho an'ny malaso Velcro, ny fihodinam-bola. sy ny tadivavarana, fonon-tanana tsy misy tànana ect.
Vidim-bidy: Any avaratry Shina no misy anay, any ambanivohitra, noho izany dia mihena ny vidin'ny mpiasa noho ny atsimon'i Chine. Matetika izahay fa TSY orinasa mpivarotra, avy amin'ny orinasa mivantana. Ny zavatra rehetra ataonay, hampihenana ny vidin'ny fividiananao, ary hanatanjaka anao amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena eo an-toerana. Hividy mivantana avy amin'ny orinasa HMD Glove dia hamonjy ny fotoana sy ny vidinao.
Ny kalitao azo antoka avy amin'ny akora akora ary ny fonon-tanana vita: HONGMEIDA fonon-tanana vita amin'ny fonon-tanana vita amin'ny kalitao kalitao kalitao kalitao kalitao kalitao ISO9001, hanaraka ny rafitra fanaraha-maso kalitao momba ny kalitao ISO9001 izahay.
Misy mpiasa mihoatra ny 800 ao amin'ny orinasa misy anay, ary mihoatra ny milina 1000, no antoka ny fotoana fandefasana.
Taorian'ny serivisy amidy
Manome tolotra aorian'ny serivisy amidy izahay, raha manana fanontaniana na olana ianao aorian'ny nahazoana ny fonon-tanana, afaka mifandray aminay ianao, hamaly anao izahay ary hanome vahaolana ao anatin'ny 12 ora.
Ny hevitra momba ny orinasan'ny orinasa dia «Quality First, Customer First», manolo-tena ho tonga mpiara-miombon'antoka azo itokisana indrindra any Shina izahay.
1. Izahao toetra ny fitaovana rehetra, araho ny lanjan'ny lamba, ny fomba knitting, ny hafainganam-pandeha loko
2. Ataovy ny santionany ho fankatoavanao alohan'ny famokarana faobe
3. Fanaraha-maso voalohany rehefa vy
4. Fivarotana fanamarinana tsiroaroa alohan'ny kitapo, diniho ny fonon-tanana tsirairay.
5. Fanaraha-maso fahatelo avy amin'ny ekipan'ny QC, misafidiana ny fonosana vita amin'ny alàlan'ny AQL2.5
6. Fanaraha-maso fahaefatra amin'ny alàlan'ny serivisy mivarotra, misafidiana ny fonosana vita amin'ny alàlan'ny AQL2.5
7. Fanaraha-maso fahadimy ataon'ny mpanjifa na fety fahatelo: alefaso amin'ny mpanjifana ny santionany amin'ny fandefasana alohan'ny fandefasana.
Fampiharana midadasika: Asa, Famokarana nokleary nokleary, indostrian'ny Elektronika, mitazona mafana, marching band, banety, Cotillion, Fiangonana, Doorman, Eczema, Serivisy sakafo, Formal, fandevenana, Choir lakolosy tanana, fandraisana marary, miaramila, Parade, Santa Claus, tsy mitovy. Ampiasaina, tsara ho an'ny lotion sy ny olana eczema.